Shirka Wadatashiga ee Madaxda dowlad goboleedyada oo maanta ka furmaya Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Shirka Wadatashiga ee Madaxda dowlad goboleedyada oo maanta ka furmaya Dhuusamareeb
Shirka Wadatashiga ee Madaxda dowlad goboleedyada oo maanta ka furmaya Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.c.om) – Magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta oo Sabti ah lagu wadaa inuu ka furmo shir wadatashi oo ay ku leeyihiin Madaxweyneyaasha Shanta Maamul Goboleed ee xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sida uu qorshuhu ahaa shirka ayay ahayd in Khamiistii uu ka furmo Magaalada Dhuusamareeb, balse dib u dhaciisa waxaa lagu sheegay, iyadoo wafuudda qaar ay xilli dambe oo Khamiistii gaareen magaaladaasi, shalayna ay ahayd maalin nasiino oo Jimco ah.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa la fillayaa in maanta uu Magaalada Dhuusamareeb ka furo shirka Madaxda Maamul Goboleedyada.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi, ayaa sheegay in Galmudug ay ku hawlan tahay, sidii ay isugu soo dhawayn laheyd Dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Fiqi oo la hadlay Laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay in Galmudug loo arkay mid dhexdhexaadin karta Dowladda Federaalka iyo maamulada qaar, ee ay siyaasadda ku kala aragtida duwan yihiin.
Wasiirka Amniga Galmudug ayaa xusay, in aanay Galmudug cidina la safnayn, hadafkeeduna uu yahay in dalka horey looga dhaqaajiyo xaaladda uu haataan wajahayo.
Ugu dambeyn, ka hor inta aan shirka lagu soo gebagabeen Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa suurtagal ah in lagu soo casuumo Dowladda Federaalka, si hadhow looga soo wada saaro war-murtiyeed loo dhan yahay.
Shirka wadatashiga maamul goboleedyada dalka